Aghọtaghị agbụrụ: Nlele na-achọpụta na a ga-emejọ ndị agbụrụ dị iche iche maka 'Ọcha - Ibi ndụ ahụike 2022
Aghọtaghị agbụrụ: Nlele na-achọpụta na a ga-emejọ ndị agbụrụ dị iche iche maka 'Ọcha
Ka anyị nwalee
Onye ka ị bụ?
N'ezie, okike na agbụrụ so n'àgwà mbụ anyị na-aghọta mgbe mbụ anyị zutere onye ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ahụ anyị bụ isi na njirimara anyị, ọtụtụ ndị mmadụ agaghị atụle ma àgwà, agbụrụ, ma ọ bụ okike àgwà ha kacha mkpa. N'ịtụle nyocha ndị na-adịbeghị anya nke na-elekwasị anya n'echiche nke agbụrụ ma jiri obi ike na-ajụ ajụjụ bụ "Ònye ka anyị bụ?", otu ihe doro anya: Echiche ndị America banyere agbụrụ na-aga n'ihu na-agbanwe ma na-eme ya n'ụzọ dị mma.
N'otu ogbako nke American Psychological Association na nso nso a, Jessica D. Remedios, Ph.D., nke Mahadum Tufts, gosipụtara ọrụ ya na izi ezi nke echiche agbụrụ. Ebe ọ bụ na a na-amata ndị otu agbụrụ n'ụzọ ziri ezi ebe a na-amatakarị ndị agbụrụ dị iche iche, o chere na ndị agbụrụ dị iche iche ga-eji ntule ziri ezi nke onye ọzọ na-enyocha agbụrụ ha n'oge mmekọrịta ọha na eze karịa ndị otu. Ya mere, agbụrụ bụ àgwà nke ndị si n'agbụrụ dị iche iche na-aghọta dị ka akụkụ a na-adịghị ahụ anya nke njirimara ha, ma nke ha nwere olileanya na ndị ọzọ ga-enyocha ya.
"Nnyocha anyị chọpụtara na ndị agbụrụ dị iche iche na-atụ anya mmekọrịta dị mma na ndị na-aghọta nke ọma agbụrụ ha n'ihi na nke ahụ na-akwado echiche onwe ha," Remedios kwuru. Ọmụmụ ihe ya, onye na-eme nchọpụta Alison Chasteen mere, metụtara 169 undergraduates kewara ụzọ abụọ. Maka nnwale nke mbụ, otu ahụ nwere ụmụ akwụkwọ nwere nne na nna sitere na agbụrụ dị iche iche na ụmụ akwụkwọ otu agbụrụ, mana ọ nweghị ndị ọcha. Nnwale nke abụọ jikọtara ụmụ akwụkwọ agbụrụ dị iche iche na otu agbụrụ gụnyere ndị ọcha.
Na nnwale nke mbụ, ndị nchọpụta were foto nke ndị sonyere wee gwa ha na ha ga-ere foto ahụ na onye ọzọ so na ya dị n'ime ụlọ ọzọ. Ọ bụ ezie na onye so na nke abụọ a bụ akụkọ ifo n'ezie, ndị nchọpụta ahụ gosipụtara foto nke onye ọcha ma rịọ onye ahụ n'ezie ka ọ mata agbụrụ ya ma tinye nkọwa. Na-esote, ndị sonyere natara ma gụọ akụkọ ifo sitere n'aka onye ọcha na-eme onwe ya, ọ bụ ezie na ndị nchọpụta dere ya n'ezie. N'ikpeazụ, ndị sonyere zara ajụjụ ndị tụlere mmasị ha nwere n'izute onye a na-eme omume. Agụnyeghị ndị ọcha n'ihi na, dị ka Remedios si kwuo, nchọpụta gara aga na-egosi na ha anaghị emetụtakarị agbụrụ ha.
Na nnwale nke abụọ, ndị nchọpụta gosiri n'ezie sonyere foto nke ma a (akụkọ ifo) ọcha nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke ma n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi mata n'ezie soò na agbụrụ. A jụrụ ha ma ọ̀ tụrụ ha n'anya maka njirimara ahụ. A jụkwara ha otú obi dị ha maka onwe ha mgbe ha gụchara ihe onye nke ọzọ kwuru banyere agbụrụ ha.
"Ndị sonyere n'ọtụtụ mmadụ (ma ọ bụghị otu agbụrụ) kwuru na mmasị dị ukwuu nke iso ezigbo onye mmekọ na-akpakọrịta," Remedios na onye otu ya dere. "Nsonaazụ a na-egosi na ndị mmadụ na-ele agbụrụ dị iche iche (ma ọ bụghị otu onye) na-ele agbụrụ anya dị ka akụkụ nke onwe (dị ka àgwà ma ọ bụ ụkpụrụ) na-achọ nkwenye site n'aka ndị ọzọ n'oge mmekọrịta."
Ndị nchọpụta ndị ọzọ na-atụ aro na agbụrụ maka ndị sonyere ha n'ọtụtụ agbụrụ bụ otu nke na-enye njirimara mkpokọta ebe otu 'dabara'.
Ụdị njụta-Identification, echiche nke omume e mepụtara na 1999, kwuputara na njụta ​​nke otu otu nwere ike iduga onye na-akọwapụta dị ka obere ka ọ na-esiwanyewanye na 'n'ime otu' ha iji chebe onwe ha pụọ ​​​​na ihe ọjọọ na ịkwalite ha. ọdịmma nke uche.
N'ime nyocha nke na-anwale Model Rejection-Identification Model na ihe atụ nke ndị agbụrụ dị iche iche, ndị nchọpụta Canada chere na ịkpa ókè a na-ahụ anya ga-agba ndị agbụrụ dị iche iche ume ka ha mara nke ọma na ndị ha na-aghọta na otu na na, n'aka nke ya, njirimara a dị iche iche ga-akwalite ọdịmma nke uche. ịbụ. "A na-echepụta njirimara ọtụtụ mmadụ dị ka nzaghachi na-anagide ya," ka ndị edemede dere.
N'ịbụ ndị na-eme nchọpụta dị iche iche, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na, na-adabere na echiche ha, ndị òtù nke multiracial otu stereotyping onwe ha dị ka ndị ọzọ multiracial ndị mmadụ, na-aghọta ndị mmadụ n'ime multiracial ụdị ka ọzọ homogenous na-egosipụta ịdị n'otu na multiracial Atiya. Ọrụ ha na-atụ aro, dị ka ndị edemede si kwuo, "na njirimara nchebe nke ọtụtụ agbụrụ na-adabere n'eziokwu na ọ na-enye njirimara mkpokọta ebe onye 'dabara'."
Na n'ụzọ doro anya na ọ na-arụ ọrụ. Nnyocha ndị gara aga achọpụtala na ndị na-achọpụta dị ka agbụrụ dị iche iche nwere ahụmahụ dị mma ma ọ bụ karịa karịa ndị na-akọwa dị ka otu agbụrụ, n'agbanyeghị ọnọdụ otu ahụ na ọha mmadụ, dị ka Jacqueline M. Chen, Ph.D., nke Mahadum University. California.
Na ogbako APA na nso nso a, Chen tụlere ọmụmụ ihe nke ya, nke ya na David Hamilton mere, nke metụtara ụmụ akwụkwọ 435 agbụrụ dị iche iche.
N'ime nnwale isii dị iche iche, a gwara ndị sonyere ka ha mata agbụrụ nke ndị ojii, ọcha, ndị Eshia ma ọ bụ ndị agbụrụ dị iche iche na foto ebe ndị nyocha dekọtara izi ezi na oge nzaghachi ha. N'ime nyocha abụọ, ndị nchọpụta ahụ jiri ọrụ n'isi yana njedebe oge; ọ ga-emetụta izi ezi nke njirimara agbụrụ onye so na ya?
N'ime nnwale ọzọ, a gwara ndị sonyere na ọmụmụ ihe bụ maka nghọta ọgụgụ na nlebara anya; mgbe ha gụchara akụkọ banyere ndị ọkà mmụta sayensị na-azọrọ na ha chọtara ihe ndabere sitere n’usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa maka agbụrụ, a gwara ha ka ha lee foto dị iche iche ma mata agbụrụ onye ahụ.
Chen chọpụtara na ndị sonyere na-enwekarị ike ịmata ndị mmadụ dị ka agbụrụ dị iche iche karịa agbụrụ otu. Ndị na-aghọta ihe na-abụkarị ndị a na-ejighị n'aka, na-ala azụ, na ndị na-adịghị ngwa n'ịhazi ndị agbụrụ dị iche iche. Chen kwuru, "N'ụwa n'ezie, oge mgbakwunye a, oge na-adịghị mma, na echiche n'oge mkparịta ụka ihu na ihu nwere ike ịkọwa ya site na onye mmekọ agbụrụ dị iche iche dị ka ihe ịrịba ama nke nchegbu ma ọ bụ ajọ mbunobi." Na, mgbe a na-akọwahie agbụrụ mmadụ, ndị na-aghọta ihe na-enwekarị ike ịkọwa onye dị iche iche dị ka ndị ọcha karịa nwa ojii.
"Taa akara agbụrụ 'ọcha' gụnyere ndị Ịtali na ndị Eastern Europe, bụ ndị a na-akpachapụ anya na iwu mbata na ọpụpụ US," Chen na onye na-ede akwụkwọ dere. Nhazi ọ bụla nke agbụrụ bụ n'ezie naanị ihe nrụpụta ọha na-agbanwe ka oge na-aga. Ka ọ dị ugbu a, ndị agbụrụ dị iche iche na-abawanye ụba. Chen na onye ya na ya na-ede akwụkwọ dere, "Mgbanwe igwe mmadụ na-agbanwe agbanwe nke ọha America ọ ga-eme mgbanwe omenala n'ụzọ anyị si aghọta na ịghọta agbụrụ?
Isi mmalite: Remedios JD, Chasteen AL. N'ikpeazụ, Onye "Na-enweta" M! Ndị agbụrụ dị iche iche na-eji izi ezi nke ndị ọzọ kpọrọ ihe gbasara agbụrụ ha. Ọdịiche Omenala na Psychology nke Obere agbụrụ. 2013.
Giamo LS, Schmitt MT, Outten HR. Achọpụtara ịkpa ókè, njirimara otu, na afọ ojuju ndụ n'etiti ndị agbụrụ dị iche iche: ule nke ụdị njụ-ajụjụ. Ọdịiche Omenala na Psychology nke Obere agbụrụ. 2012.
Chen JM, Hamilton DL. Ihe mgbagwoju anya eke: nhazi agbụrụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Akwụkwọ akụkọ gbasara akparamàgwà mmadụ. 2011.